November 2019 - Latest Myanmar News
ခြေဖနောင့် ကွဲတတ်သူများ အတွက် ပျောက်ကင်းသည့် နည်းလမ်းလေးများ
November 30, 2019 Latest Myanmar News 0
ခြေဖနောင့် ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးလေးများ မကြာခင် တစ်မိုးကုန်လို့ တစ်ဆောင်း ဝင်လာပါတော့မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်များသူတွေနဲ့၊ နေ့လယ်ဘက် နေပူပူထဲလမ်း လျှောက်အထွက်များသူတွေအဖို့ ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အခါ အပူကန်ထွက်လေ့ရှိကြပြီး ခြေဖနောင့် အရေပြားများ ကွဲအက်လာ ပါတော့တယ်။ အချို့သူတွေမှာ သိပ်ဆိုး ဆိုးရွားရွားကြီးမဟုတ် အမြင်ဆိုးရုံလောက်သာ […]
မနက်ဖန်သာ ထီပေါက်ရင် ကျုပ်တို့ ဘယ်လိုထုတ်ကြရမလဲ
မနက်ဖြန်ထီပေါက်ရင်ဘယ်လိုထုပ်ရမလဲ❓ဆိုတာသိရအောင်ရှယ်ထားနော်မိတ်ဆွေတို့ရေမင်မင်ကတော့ရှယ်ထားပြီ မနက်ထီပေါက်မှာလေမင်မင်က ထီပေါက်ရင် ထီရုံးချုပ် ၃၇ လမ်းမှာသွားထုတ်ရပါမယ် ဘာတွေထည့်သွားရမလည်းဆိုရင်တော့….👇 1. အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း နဲ့ မိတ္တူ 2. မှတ်ပုံတင်မူရင်း မိတ္တူ 3. ထီလက်မှတ် 4.ပတ်စပို့စ် ပုံ ၃ ပုံ ( ၅သောင်းဆုဆိုရင်တော့ ၁ ပုံဆိုရပါတယ်) […]
ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးအား အာရုံဖြင့်ဦးခိုက်လျှက် မဟာမြိုင်မှ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး
“မဟာမြိုင်မှ မြွှေဆိပ်ဖြေဆေး” မြွေပွေးမြွေဟောက်နှင့်အဆိပ်ရှိသတ္တဝါတို့၏အဆိပ်ကို အရွက်စားရုံနှင့်သက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် တောဓားပြပင် ဇမ္ဗူဒိပ်ဂျာနယ် ကျီးအာမြစ်(၅)ကျပ်သား၊ တောဓါးပြပင်ပဉ္စ(၅)ပါး(၅)ကျပ်သား၊ မန်ကျည်းစေ့(၅)ကျပ်သား စုစုပေါင်း(၃)ပါးကိုနေလှန်း၊နေလှန်းရာမှာထိုက်သင့်ရုံလှန်းရ ကြောင်း အလွန်ခြောက်ကပ်သွားပါက ဆေးအာနိသင်ပြေသွားပြီး ဆေးအစွမ်းထိထိရောက်ရောက်မရရှိကြောင်း နှင့်အဲဒီမှာမှတ်သာစရာကောင်းတာကတောဓါးပြပင်ရဲ့ပဉ္စငါးပါးကို သတ္တုရည်ညစ်ပြီးသိမ်းထားရသည်ဟုဆိုပါသည်။ထိုဆေးအမယ်(၃)ပါးအားအမှုန့်ပြုပြီးဆားအနည်းငယ်သွင်း၍ တောဓါးပြပင်၏ သတ္တုရည် စိမ်းဖြင့်နယ်၍ဆေးလုံးလေးများလုံးထားကာ လေဖြင့် အခြောက်ခံရခြင်းဖြစ်လေသည်ဟုမိန့်လေတော့သည်။ အခုလိုမိန့်ကြားပြသပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလျှောက် လေရာ ဒကာကြီး […]
မမှန်ခြင်း၊ ထိန်ခြင်း၊အရေပြား ယားယံတတ်ခြင်း၊မီးယပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝေဒနာများအတွက် ဆေးတဖုံ
ဓမ္မတာ မမှန်ခြင်း, ထိန်ခြင်း, ဓမ္မ္မတာမလာမီ အရေပြား ယားယံတတ်ခြင်း ဓမ္မတာမလာမီ ကိုက်ခဲတတ်ခြင်း စသော မီးယပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဝေဒနာများကို ခံစားနေရသော အမျိုးသမီးများအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆေးဖော်နည်း တစ်ခု ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးတစ်ဖုံ ဖေါ်ရန်အတွက် စောင်းလျားသီး ( ၂၁ လုံး ) သကြားညို […]
အသက်မပြည့်သေးသည့် ကျောင်းသားများအား ဆိုင်ကယ်စီးခွင့််မပြုရန်ပြောကြား
အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကျောင်းသားများ ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင်ခြင်း မပြုရန် ဒုပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ပြောကြား အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ယူနေသည့် အသက် ၁၆ နှစ်အောက် ကျောင်း သား/သူများအနေဖြင့် ကျောင်းတက် /ကျောင်းဆင်း ပြုလုပ်ရာ၌ မော် တော်ဆိုင်ကယ်အား ကိုယ်တိုင်စီး နင်း မောင်းနှင်ခြင်း […]
ဆောင်းရာသီစာ မုန်​လာဥပိုးတီချဉ်​သုပ် သုပ်နည်း
မုန်​လာဥပိုးတီချဉ်​သုပ် အိမ်​မှာ ကိုယ်တိုင်လှီးပြီးတည်​ထားတဲ့မုန်​လာဥပိုးတီချဉ်လေးသုပ်မယ်နော်​ မုန်​လာဥပိုးတီလေး​တွေနဲ့အရွက်​​လေး​တွေကိုညှပ်ထည့်​ ကြက်သွန်​နီ ၂ လုံးပါးပါးလှီးထည့်​ ပုစွန်​​ခြောက်​ ​မြေပဲ ကြက်​သွန်​ဖြူ​ကြော်လေးထောင်းထည့်​ပြီး ဆီနဲနဲ ငါးငံပြာရည်​ ​လေးထည့်​ ၊ ငရုတ်သီးအနီ​တောင့်​​လေးညှပ်​ထည့်​ နှမ်းနက်​​လေးဖြူးပြီးသုပ်​ထားတဲ့ home made မုန်​လာဥပိုးတီချဉ်​​သုပ်​​လေးပါ ထမင်း​လေးနဲ့တွဲပြီးအရံဟင်းအသုပ်လေးတစ်​ပွဲနဲ့စားလို့​ကောင်းပြီ​နော်​…… မုန်​လာဥပိုးတီချဉ်​ဖတ်​လှီးနည်း သုပ်နည်းသင်​​ပေးခဲ့တဲ့ ဘွားမြကြီးကို…..ကန်​​တော့လျှက် marlay Unicode […]
လစာထုတ်ရက်မှာ ဒီအချက်(၅)ချက်ကို လုပ်ပေးပါ
၀န်ထမ်းများအနေနဲ့ လစာထုတ်ရက်မယ် လုပ်သင့်တဲ့ အချက်(၅)ချက် (၁) ထီထိုးပါ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတိုင်းဟာ ဘယ်တော့မှ ချမ်းသာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ထီပေါက်မှသာ အနာဂါတ်အတွက် အစီအမံများကောင်းစွာဆောင်ရွက်ရန် အထောက်အပံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထီထိုးပါ။ အနည်းဆုံး သုံးစောင်တွဲတစ်စောင်လောက်ပေါ့။ (၂) စာအုပ်ဝယ်ပါ စိတ်ခွန်အားဆိုတာ စာဖတ်ခြင်းမှ ရရှိနိုင်တာဖြစ်လို့ စာကောင်းပေမွန်များ ဖတ်ရှုဖို့ […]
ကားရေတိုင်​ကီ အဖုံးကို ခဏခဏဖွင့်တတ် လဲတတ်သူများ သတိပြုရန်
November 29, 2019 Latest Myanmar News 0
ရေတိုင်​ကီ အဖုံး အ​ကြောင်း အရမ်း​ကောင်းလို့ ပြန်​လည်​ မျှ​ဝေပါ​ရ​စေ… ရေတိုင်ကီ အဖုံးကို ခဏခဏဖွင့်ပြီးရေထည့်သူများ အဖုံး ကို Kpa & Bar နားမလည် ဘဲ အသစ်လဲ ထည့်သူများအသစ်လဲသူများ ဖတ်ရန် ဈေးပေါတိုင်းလဲကြတာလေ ရေတိုင်ကီများ၏ ရေဖြည့်ပေါက်တွင် pressure cap ခေါ် […]
အကြွေးများ ကင်းရှင်းစေရန် ပုတီးစိပ်နည်း အကြွေးဆိုသည်မှာ ချစ်ကြွေး မုန်းကြွေး သံသရာ အကြွေး ရာဇဝင်ကြွေး သွေးကြွေး ငွေကြွေး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရှိကြသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အကြွေးမှန်ရင်တော့ တနေ့ ပေးဆပ်ကြရမည်။တစ်လုပ် စားဖူးသူ့ကျေးဇူးပင်။ ထိုအကြွေးများကို ကျေအောင်ဆပ်ကြ နောက်ဘဝတွေမှာ ထပ်မဆပ်ကြနဲ့…. ကျွန်ုပ်မှတ်သားဖူးသော အကြွေးကျေနည်း/အကြွေးဆပ်နိုင်အောင် ကုသိုလ် […]
အမူးလွန် ရှော့ဖြစ်သူအား အရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆေး
“ခြေဖဝါးကို ဆား နဲ့ ပွတ်ယင် အာရုံကြောတွေ ပွင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပါ” ၂၀၀၂ လောက်က ကျွန်တော် အရက်သောက်ယင်း အမူးလွန်ပြီး သတိလစ်၊ ပါးစပ်ထဲ အစာတွေပြည့်ပြီး အသက်ရူမရ ဖြစ်လို့ မျက်ဖြူလန်ပြီး သေမလိုဖြစ်ဖူးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်ပေးလို့ ပါးစပ်ထဲက အစာတွေ အလိုလို […]
ချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး တစ်ဖက်သားကို အရူးမလုပ်မိပါစေနဲ့
မျှစ်ကို လချီ၊ နှစ်ချီ ခံအောင် သိမ်းထားနည်း